Female na Netherlands ẹkenịmde ofu na euthanasia
Ugbu a ndị dọkịta na-agbalị n'ụlọikpe na tọhapụwo na applåders ekele dịrị n'ụlọikpe ahụ.
A 74-afọ Alzheimer Ọrịa nwaanyị na Netherlands ẹkenịmde ke ebe ndị ikwu na ndị nwetara "euthanasia" n'okpuru duress afọ atọ gara aga.
onsdag 25 september 2019 16:28 📧
Mkpọrọgwụ ofu dependents
A 74-afọ Alzheimer Ọrịa nwaanyị a na-ẹkenịmde ala ndị ikwu na nwetara "euthanasia" n'okpuru duress na Netherlands afọ atọ gara aga. Mgbe dọkịta nyere kpara injection bụ ya na ezinụlọ ya ofu ya.
Weere na emewo omume n'ụzọ kwesịrị ekwesị
The ikpe mara ọkwa na dọkịta na-tọhapụrụ na-atụle emewo omume n'ụzọ ziri ezi. The Court na-ekwere na ọchịchọ na-anwụ anwụ na-adịghị mkpa na-enen ke ọrịa na oké mgbaka.
The nwaanyị na-nwere ọtụtụ afọ tupu mgbe jụrụ maka euthanasia, kama agwụcha elu na a-elekọta ndị agadi, ma ọ na-ama n'oge ndị ọzọ sịrị na ya chọrọ ka bi na ya.
"The ikpe-ekpughe ihe iyi egwu na n'Ụzọ Iwu Kwadoro nyere aka igbu onwe virus ka ndị mmadụ n'otu n'otu na ọha mmadụ n'ozuzu", na-ekwu Andreas Thonhauser, ọnụ na-ekwuchitere Alliance Ịgbachitere Freedom International.
6126 ndị mmadụ wee na "euthanasia" na Netherlands n'afọ gara 2018th
"Euthanasia" na-enye enweghị olileanya
M na kwuru ya n'ihu na ga-asị ọzọ: Anyị ga-enye ndị mmadụ na "euthanasia" na-enweghị ihe oriri aka. Anyị kwesịrị inyere ndị mmadụ bi - bụghị "aka" ha na-anwụ anwụ.
Maka euthanasia bụ n'ezie ọ dịghị aka. Ọ bụ ọgwụgwụ, nnọọ jogburu na-enweghị olileanya. "Euthanasia" bụ irreversible, ma na ndụ pụtara e nwere olileanya, pụtara na ntụkwasị obi.
The nri kasị mma enyemaka
The kacha mma ndụ enyemaka na anyị nwere ike inye ndị mmadụ bụ Jizọs Kraịst. Anyị ga-agwa ha banyere Jizọs mere na ha nwere ohere nke inweta Ya-azọpụta. Mgbe ahụ, ha n'ezie ndụ. Ee, ha ga-enwe ezi ndụ ebighi ebi.
John 3:15 . ka onye ọ bụla nke kwere na ya [Jesus] ghara ila n'iyi, kama ka o nwee ndụ ebighị ebi.
John 3:16 . N'ihi na Chineke hụrụ ụwa n'anya nke na o nyere Ọkpara ọ mụrụ naanị [Jesus], ka onye ọ bula nke kwere na ya we ghara ila n'iyi kama ka o nwee ndụ ebighi ebi.
John 3:36 . Onye kwere Ọkpara ahụ [Jizọs] nwere ndụ ebighị ebi, ma ọ nēkweghi na Ọkpara ga-agaghị ahụ ndụ, maka iwe Chineke nānọgide n'aru-ya.
Anyị bi n'oge na mgbe ọ bụ ihe dị mkpa karịa mgbe ọ bụla na anyị na-agwa banyere Jizọs ndị mmadụ nke mere na ha ga-enwe ike inweta ya na-azọpụta.
Ndị mmadụ mkpa olileanya, na olileanya bụ na Jizọs Kraịst!
Vecka 19, måndag 10 maj 2021 kl. 21:03